Vokatra James Charles amidy amina 50% any amin'ny fivarotana Ulta, manontany ny olona raha toa ka «mendrika ny hividy» - Pop-Kolontsaina
Vokatra James Charles amidy amina 50% any amin'ny fivarotana Ulta, manontany ny olona raha toa ka «mendrika ny hividy»
Taorian'ny fiampangana an-tsokosoko maro sy ny fanenjehana nataon'ny mpamokatra azy teo aloha, dia efa nazeran'ny mpanohana rehetra i James Charles. Anisan'izany i Morphe, izay nanolotra ny palette artistry voalohany an'i James, izay toa namidy efa ho antsasaky ny sasany tao amin'ny magazay fanomezana ho an'ny hatsaran-tarehy Ulta tamin'ity andro fahatsiarovana ity.
Ny fahatsapana ny Aterineto dia naneho voalohany ny paleta 'James Charles x Morphe' tamina horonantsary tamin'ny Novambra 2018 mitondra ny lohateny hoe, 'James Charles x Morphe Reveal.'
Amin'ny maha-mpampianatra hatsaran-tarehy azy dia efa nangataka azy ireo mpankafy mba hanao paleta manokana satria izy dia tena mpanakanto. Ary io palette io dia namidin'i Morphe sy Ulta vao tsy ela akory izay.
Vokatr'i James Charles ao Ulta
Hatramin'ny namotsorana azy ireo, ny vokatra vokarin'ilay zaza 22 taona dia be mpankafy hatrany tamin'ireo mpankafy azy sy ireo mpampianatra momba ny makiazy hafa.
Na izany aza, hatramin'ny nahitana ny fiampangana azy dia nihena be ny varotra ny vokariny. Izy ireo aza dia voalaza fa efa nozaraina tany amin'ny fivarotana fitafiana fihenam-bidy any Etazonia, toa an'i Ross.
Toa ambany ambany ny vidin'ireto vokatra ireto, satria nanosika ny mpanjifany hanala azy ireo i Ulta.
Palette artista an'i James Charles niara-niasa tamin'i Morphe (Sary avy amin'ny Twitter)
d-von alao ny latabatra
Ny palette habe tany am-boalohany, araka ny hita etsy ambony, dia amidy tamin'ny $ 39 tamin'ny voalohany. Na izany aza, nidina tsy ho ela ny $ 10 izy io, amidy 29 $ ankehitriny. Ity no sangan'asa nalaza indrindra tamin'i James Charles, satria maro ny influencer no nampiasa azy io tamin'ny fanaon'izy ireo fanaingoana.
Ny entana faharoa namidy dia ny palette James, kinova kely.
Ny paleta 'mini' dia namidy ihany koa niaraka tamin'ny vokatra James Charles hafa (Sary avy amin'ny Twitter)
Tamin'ny fivarotana voalohany tamin'ny $ 26, dia nidina avy teo amin'ny talantalana ity entana ity raha vao nilatsaka hatramin'ny antsasaky ny vidiny ny vidiny, tamin'ny $ 15.
Ny vokatra fahatelo sy farany amidy amidin'i Ulta avy amin'ny fanangonana an'i James Charles dia ny borosy fanaovana makiazy.
Ny borosy makiazy nataon'i James Charles koa dia nampiana ho an'ny faritra amidy (Sary tamin'ny alàlan'ny Twitter)
Namidy tamin'ny $ 59 teo aloha, ny olona izay mbola mpankafy dia afaka nahazo ny Eye Brush Set tamin'ny vidiny izay heverina ho 'mangalatra'. Amin'ny $ 35, ny volon-tsoleta dia ny entana lafo vidy indrindra an'i James Charles. Na izany aza, tsy niantra an'izany i Ulta.
Manontany tena ny mpankafy raha 'mendrika vidina' ny fanangonana
Na eo aza ny scandals misy azy , mpankafy teo aloha sy ankehitriny, ary mpampianatra makiazy mahazatra, izay tsy nanana fotoana hanandramana azy ireo taorian'ny famoahana ny taona 2018, dia te hahita ny kalitaon'ny vokatra rehetra.
Satria i James Charles dia mpampianatra hatsaran-tarehy an-tserasera fantatra amin'ny sehatra iraisampirenena miaraka amina mpankafy sy olo-malaza marobe tonga any aminy, maro no naniry hahafantatra ny momba ny resaka hafahafa rehetra teo aloha.
Lol saika eny
- mikraoba 🤙 (@fermypoo) 31 Mey 2021
40% izany tao amin'ny Ulta akaiky ahy. pic.twitter.com/xgdPNWoYcC
- Kat (@_KeKat) 31 Mey 2021
amidy andro fahatsiarovana
- ethan (@ethaanmodic) 31 Mey 2021
Mivoaka alahelo i James
- Alex Lores¹¹ (@_ajlores__) 31 Mey 2021
Tena tsara ny makiazy manafina ny heloka bevava nataonao taloha
- BobbyTwoToes11 (@ BToes11) 31 Mey 2021
Manenina eo noho eo? Tsy misy na inona na inona eo noho eo.
- Broadway Butterfly (@Bway_ Butterfly) 1 Jona 2021
Lehilahy ity dia ho mpangalatra be raha tsy mampihoron-koditra ny vokatra. Tsy hanome 15 $ akory aho ho an'ireo
- Vaksiny 100% - Shot Girl Summer (@WatchMyShoes__) 1 Jona 2021
lmao na dia ao amin'ny tranokala sephora canada aza
- Nightingale (@ moonlittle24) 1 Jona 2021
Ny mpampiasa Twitter aza dia tavela hanontany tena raha toa ka mividy ny vokatr'i James midika ve izy ireo fa manohana azy.
Saingy ... hay ry zalahy fa vidiana izany? Midika ve izany fa mpanohana mpiremby aho satria mividy ny entany? Tsy tiako izany fa tena maka fanahy.
- kiro275 (@ kiro275) 31 Mey 2021
Ny hafa nidera an'i Ulta noho ny 'farany' nanao izay tokony ho nataon'izy ireo taloha kelin'izay: nilatsaka i James Charles.
tsy tiako ny mifandray amin'ny masoko
Manao zavatra mety i Ulta amin'ny farany pic.twitter.com/a3UzpAKbGD
- Frenemies Out of Context (@Frenemiespods) 31 Mey 2021
Noho ny tsy fiandrasana ny raharaha amin'izao fotoana izao, dia niato tamin'ny haino aman-jery sosialy ilay mpanakanto make-up miorina amin'ny YouTube. Na izany aza, niverina indroa tao anatin'ny roa herinandro izy , ka nahatonga ny sain'ny olona hanontany tena raha hiverina fanintelony izy atsy ho atsy.
ny dikan'ny hoe tsy mivadika
ny fomba hiatrehana mahalala izany namana rehetra
aiza no hijerena tsy miaina
ny olon-tiako efa nandainga tamiko hoe ahoana no hatokisako azy indray
ahoana ny fomba hanajanonana am-panajana ny daty iray
te-hanao zavatra manokana ho an'ny sakaizako aho